Tag: suuq geynta barnaamijka mobilada | Martech Zone
Tag: suuq geynta barnaamijka mobilada
Iyada oo in ka badan 2.87 milyan oo codsi ah laga heli karo Android Play Store iyo in ka badan 1.96 milyan oo codsi ah oo laga heli karo iOS App Store, ma buunbuuninaynno haddii aan dhahno suuqa barnaamijka ayaa si sii kordheysa u sii xumaanaya. Caqli ahaan, barnaamijkaagu lama tartamayo barnaamij kale oo ka socda tartamaaga isku niche laakiin wuxuu la socdaa barnaamijyo ka kala socda qaybaha suuqyada iyo niches. Haddii aad u malaynayso, waxaad u baahan tahay laba walx si aad uga dhigto isticmaaleyaashaadu inay ku sii hayaan barnaamijyadaada - ayaga
Waxaan leenahay shirkado bilow ah, shirkado la aasaasay, iyo xitaa falanqeyn heer sare ah iyo shirkado casri ah oo noogu yimaada caawimaad si ay u kobciyaan ganacsigooda internetka. Iyada oo aan loo eegin cabirka ama heerka ay gaarsiisan tahay, marka aan wax ka weydiinno qiimahooda-iibsiga iyo qiimaha nolosha (LTV) ee macaamilka, inta badan waxaan la kulannaa indho indheyn madhan. Shirkado aad u tiro badan ayaa xisaabiya miisaaniyada si fudud: Aragtidan, suuqgeynta suuqyadu waxay u socotaa safka kharashka. Laakiin suuqgeyntu maaha kharash sida kiradaada oo kale… waa
Sida Loo Suuq Geeyo App-kaaga Mobilada
Sabtida, Oktoobar 10, 2015 Sabtida, Oktoobar 10, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhawaan wadaagnay qiimaha sare iyo guuldarada barnaamijyada moobilada ee shirkadaha, laakiin faa'iidooyinka barnaamijka moobiilka wanaagsan ayaa si fudud aad ugu weyn in la iska indhatiro Qorshaynta dhinaceeda oo ah qodob muhiim ah, khibradda kooxda horumarinta mobilada iyo dhiirrigelinta barnaamijka labaduba waa muhiim. Abkaagu wuxuu kor ugu kici karaa dusha sare ee raadinta qof walba si uu ugu gacan sarreeyo suuqa mobilada. Ku hirgeli talooyinka ku dhex jira macluumaadka ku saabsan hagaha si aad u kobciso taada